Ajụjụ - Guangzhou Zeno Electronics Co., Ltd.
Universal TV mgbidi mounts
Tilt TV mgbidi mounts
TV ụgbọ ala
TV N'uko mounts
Nyochaa ogwe aka
Set-top Igbe shelf
Ọnụahịa anyị ga-agbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ dị n'ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta emelitere ọnụahịa mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe.
Maka ihe atụ, oge ndu bụ ihe dị ka ụbọchị 7. Maka imepụta oke, oge ndu bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị natara ego nkwụnye ego. Oge ndu na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere ihu ọma ikpeazụ maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na oge ị ga - emechi, biko gafee ire gị maka ire ere gị. N'ọnọdụ niile, anyị ga-anwa igbo mkpa gị. Ọtụtụ mgbe anyị nwere ike ime ya.
You na-ekwe nkwa nzipụ na nchekwa nke nnyefe nke ngwaahịa?
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu. Anyị na-ejikwa ngwongwo ihe ọghọm pụrụ iche maka ngwongwo dị egwu yana ihe nchekwa nchekwa dịpụrụ adịpụ maka ihe ndị nwere ọnọdụ okpomọkụ. Ngwunye ọkachamara na ihe ndị na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike ịnweta ụgwọ ọzọ.
Ogige Qimeng Chuangye, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China